China Black Cotton Canvas Cloth Tote Shopping Bag miaraka amin'ny Logo sy mpanamboatra MOQ ambany ambany | Zhihongda
Kitapo tanana vita amin'ny lamba rongony vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba miaraka amin'ny Logo sy ambany ambany MOQ
MESINY SOSO-PANORENANA & ECO-NAMANA COTTON. Vita amin'ny lamba canvas matevina sy tsara kalitao izy ireo, izay mahazaka fivarotana 50+ pounds ary manolo kitapo fivarotana enta-mavesatra 2-3. Amin'ny alàlan'ny fampiasana indray ireo kitapo fivarotana enta-mavesatra azo ampiasaina sy fitazonana plastika tsy ho any anaty tanety sy ranomasina!
1. Loko namboarina, habe, karazany sns, azo tratrarina ny fangatahana rehetra
2. FANASANANA MASINA & FITAOVANA ETO AMIN'NY COTTON. Vita amin'ny lamba canvas matevina sy tsara kalitao izy ireo, izay mahazaka fivarotana 50+ pounds ary manolo kitapo fivarotana enta-mavesatra 2-3. Amin'ny alàlan'ny fampiasana indray ireo kitapo fivarotana enta-mavesatra azo ampiasaina sy fitazonana plastika tsy ho any anaty tanety sy ranomasina!
3. Tsara ho an'ny tetik'asa sy fanomezana! Tsara ho an'ny DIY! Mety tsara amin'ny tetik'asa ho an'ny reny, tetik'asa DIY! Fanaovana asa-tanana ho an'ny fanomezana krismasy! Asa tanana! Ireo kitapo lamba rongony ireo dia mahomby amin'ny famolavolana sary sublimation rehetra. Hetsika fety mahafinaritra! Azonao atao ny mampiasa loko akrilika ary nipoaka ny ankizy. Tsara habe ary tsara ho an'ny sary hosodoko.
4. Manontany tena ianao hoe inona no homena amin'ny tetikasa asa tanana? Ireo kitapo ireo miaraka amin'ny hevitra handravahana azy tenany amin'ny loko vita amin'ny asa-tanana. Kalitao lehibe, voasasa tsara, ho tonga lafatra amin'ny amboradara! Loko tena tsara hampiasaina HTV ho an'ny fanomezana natokana ho azy! Ireto kitapo ireto dia ny refin'ny tote mety indrindra. Izy ireo dia afaka mifanaraka amin'ny zavatra maro ao anatiny ary vita tsara. Azonao atao ny mampiasa loko akrilika sy borosy ho an'ny sary hosodoko. Manify fotsiny izy handoko eo amboniny! Izy ireo dia tsara habe amin'ny hitazonana loko tsara amin'ny lamba.
5.1 GARANTEE TSY MISY RIP TAO: Hosoloinay na haverinay ny kitapo izay rip na tapaka ao anatin'ny 1 taona nividy. Mitsitsia vola amin'ny baiko maromaro miaraka amin'ny fonosana!
Anaran-javatra Kitapo tanana vita amin'ny lamba rongony vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba miaraka amin'ny Logo sy ambany ambany MOQ
Teo aloha: 100% Cotton Canvas Tote Black Shopping Reusable Grocery Bag misy ambongadiny printy ^ p
Manaraka: Kitapo kitapo lamba rongony vita amin'ny canvas tsotra vita amin'ny gusset ambany
Tote Bag Tote 100% vita amin'ny lamba rongony vita amin'ny rongony miaraka amin'ny ...
Fampiroboroboana ny kitapo vita amin'ny lamba rongony fotsy vita amin'ny lamba volon-koditra ...
Custom vita amin'ny landihazo lamaody avo lenta manokana ...
Kitapom-boanjo legioma vita amin'ny voankazo manokana
Fampiroboroboana dokam-barotra manokana Logo Pr ...
Coler 100% landy vita amin'ny lamba rongony vita amin'ny landy ...